जतिसुकै पुरानो मुसा किन नहोस्, केवल एकदिनमै यसको प्रयोगले हुनेछ गायब ! – Krazy NepaL
February 1, 2021 405
काठमाडौँ । शरीरमा मुसा पलाएर हैरान हुनुहुन्छ ? या मुसा पलायो भने के गर्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ ? चिन्ता मेटाउने नाममा मुसा काटेर–कोट्याएर फाल्ने गल्ती नगर्नुहोस् । मुसाबाट रगत निस्किएपछिको परिणाम झनै भयावह हुनसक्छ ।
के हो मुसा ? शरीरमा मुसा ‘ह्युमन प्यापिलोमा’ भाइरसको संक्रमणले आउँछ । नवजात शिशुबाहेक प्रायस् सबै उमेरका मानिसमा यो रोग लाग्नसक्छ । भाइरसको संक्रमणपछि छालामा नदुख्ने खालको सानो ट्युमरजस्तो आउँछ । यो कसैमा कम हुन्छ भने कसैमा धेरै । धेरै या थोरै आउने दर मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा भर पर्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकामा मुसा बढी आउँछ । बलियो क्षमता भएकालाई एक–दुईवटा आएर आफैँ हराउन सक्छ ।
मुसा सर्छ ?
संक्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा मुसा सर्ने गर्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भएकालाई भने नसर्न पनि सक्छ । कतिपयले शरीरमा आएको मुसा काटेर फाल्ने गर्छन् । यो गलत तरिका हो । काटेको मुसाको रगत शरीरका अन्य भागमा या अन्य व्यक्तिलाई लाग्यो भने त्यसबाट मुसा सहजै सर्छ । हेर्दा सामान्यजस्तो देखिए पनि मुसाले कोही व्यक्तिलाई दीर्घकालमा क्यान्सर निम्त्याउन सक्ने पाइएको छ ।
मुसा दोहोरिन्छ ?
एकपटक मुसा आएर पूर्ण रूपमा निको भएपछि दोहोरिने सम्भावना कमै हुन्छ
ह्युमन प्यापिलोमा भइरस भएको हुँदा एकपटक आएर निको भइसकेपछि शरीरले त्यसविरुद्ध एन्टिबडी तयार गरिसकेको हुन्छ । तर, पूर्ण रूपमा निको नभएको अवस्थामा भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने दीर्घरोग लागेमा मात्र दोहोरिने सम्भावना हुन्छ ।
उपचार विधि मुसा धेरै मानिसमा निश्चित समयपछि आफैँ निको हुन्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताअनुसार ढिलो–चाँडो निको हुनसक्छ । मुसा निस्किने क्रम र आकार पनि बढ्न थाले तत्काल छालारोग विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर उपचार गराउनुपर्छ ।
यो सामान्यतया एसिड पातहरु को रूप मा प्रयोग गरीन्छ। तपाईं यसको प्रयोग गरेर यस समस्याबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। यसको लागि पातहरूको पेस्ट बनाउनुहोस्। यसको लागि यस पातहरूलाई अलि पानीमा पीस्नुहोस्। दिनमा २ पटक मौसामा लागू गर्नुहोस्। केहि दिन भित्र तपाईले भिन्नता देख्नुहुनेछ।
मुसालाई हटाउनको लागी केराको बोक्रा मुसा भएको ठाउँमा राखी रातभरी राख्ने गर्नुपर्दछ ।यो बिधि दैनिक प्रयोग गरेमा मुसा आउने समस्या कम हुन्छ ।
Prevचीनले तीन लाखडोज खोप उपलब्ध गराउने
Nextअनुहारको दाग हटाई गोरो बनाउने ज्यादै सजिलो घरेलु तरिकाहरु जान्नुहोस्
अत्यावश्यक बाहेक फेरि सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिने एक सातासम्म यस्तो आयो सूचना !
काँचो प्याज खानु हुन्छ ? खानु हुन्न भने आजै बाट खानुहोस् यी ४ रोग निको हुन्छ !